Izinkampani ze-SaaS Excel ekuphumeleleni kwamakhasimende. Nawe Ungakwenza ... Futhi Nansi Indlela | Martech Zone
Isoftware akuyona nje ukuthenga; ubuhlobo. Njengoba kuguquka futhi kuvuselelwa ukuhlangabezana nezidingo zobuchwepheshe obusha, ubudlelwano buyakhula phakathi kwabahlinzeki be-software nomsebenzisi wokugcina — ikhasimende — njengoba umjikelezo wokuthenga okungapheli uqhubeka. I-Software-as-a-service (SaaSabahlinzeki) bavame ukwenza kahle kakhulu kumakhasimende ukuze baphile ngoba benza umjikelezo wokuthenga okungapheli ngezindlela ezingaphezu kweyodwa.
Ukuhlinzekwa kwamakhasimende okuhle kusiza ekuqinisekiseni ukwaneliseka kwamakhasimende, kukhuthaza ukukhula ngokusebenzisa imithombo yezokuxhumana nokudluliselwa ngomlomo, futhi kunikeza abasebenzisi ukuzethemba bokwandisa ubudlelwano babo ngokusebenzisa insizakalo eyengeziwe namakhono. Kubahlinzeki be-SaaS ababambe iqhaza engxenyeni ye-B2B, lokhu kungasho izinombolo ezibalulekile zezihlalo ezengeziwe namalayisense, konke okuvela kwikhasimende elilodwa.
Emnothweni wosizo wokuncintisana wanamuhla, ukwesekwa kwamakhasimende okuhlukile kungaba okwahlukanisa umkhiqizo okubaluleke kunakho konke. Unalokho engqondweni, nazi izeluleko ezimbalwa ezibalulekile ezivela emkhakheni we-SaaS:
1. Ungavumeli okuhle (ukonga izindleko) kube yisitha sezinto eziphelele (ukwaneliseka kwamakhasimende).
Ukugcina izindleko ziphansi impela umgomo ofanele. Kuthathwe ngokweqile, noma kunjalo, kungaholela ezinqumweni ezithile zebhizinisi ezimbi.
Imisebenzi eminingi yokuhlinzekwa kwamakhasimende izamile ukuphatha izindleko ngokunciphisa ukwesekwa kwamakhasimende abo, ngokuncipha kokuhlangenwe nakho kwamakhasimende njengomphumela. Abanye basungule izinketho ezengeziwe zokuzenzela izinsizakalo, okungaba isichasiso sokuthi "funda le ndatshana bese uzibonela ngokwakho," kepha abahlinzeki be-SaaS bangongoti bokuqonda ubukhulu obulodwa abuhambelani konke. Iminyaka eyizinkulungwane ze-Tech-savvy neGen Zers zingalunga ngenketho yokuzihlinzeka nge-inthanethi, kepha amakhasimende kaGen X namakhasimende asebenza ngokukhetha ukusebenzisa ifoni abheka ukuzisebenzela njengendlela elula yokuqeda ukuxhumana kwabantu ngqo.
Izinhlangano zokusekela ezizama ukubala kabusha inselelo yezindleko ngokunciphisa isikhathi sokuxhumana nazo ziyalahlekelwa yiphuzu. Ngokukhuthaza abenzeli ukunciphisa isikhathi esichithwa kukholi ngayinye, ingxoxo, umyalezo, noma i-imeyili, kulula ukungaqondi noma ukuziba izidingo zamakhasimende. Okuhlangenwe nakho okubi ngokuvamile kuba umphumela.
Kubalulekile ukwazisa ukubaluleka kokuhlangana kwekhwalithi ekuthembekeni kwamakhasimende kwesikhathi eside, ikakhulukazi phakathi komjikelezo wokuthenga okungapheli. Kuze kube yilapho izinkampani zifaka izindleko zokukhwabanisa, ukulahlekelwa ukwethenjwa, nokonakaliswa kwezimpawu zomkhiqizo, ukonga izindleko zesikhashana kuzoqhubeka nokunqoba impumelelo yesikhathi eside.
2. Beka phambili lezi zimethrikhi ezimbili esikhundleni salokho.
Izinsizakalo ezinhle kakhulu zamakhasimende nezinhlangano zokusekela zigxila kumamethrikhi ambalwa: ikakhulukazi:
Ijubane elimaphakathi ekuphenduleni - imethrikhi (okuthile okufana nesivinini esimaphakathi ukuphendula, noma ASA), elingalinganiswa nganoma iyiphi ipulatifomu yesimanje yokusekela; futhi eyodwa igxile ekwanelisekeni kwamakhasimende, ngamamethrikhi aqoqwe ngocwaningo olusheshayo lwangemva kokuxhumana. Izikhathi zokuphendula ziyi-barometer yokwenza kube lula, ukufinyeleleka nokwaneliseka, ngakho-ke izimpendulo kufanele zisheshe ngangokunokwenzeka.
Izikolo zokwaneliseka kwamakhasimende - kanye nokuphawula kwamahhala, khombisa ukuthi ngabe izidingo zamakhasimende zekhwalithi ephelele yensizakalo (QoS) zahlangatshezwa. Esikhundleni sokwahlulela ukusebenza kahle usebenzisa amamethrikhi afana izinqumo zokuqala zokuthinta nesikhathi sokushaya ucingo — esingasetshenziswa kalula futhi ekugcineni singanqumi i-QoS-abahlinzeki be-SaaS bathola impumelelo ekulinganiseni i-ASA kanye nokwaneliseka okuphelele.
3. Cabanga ngekhasimende sengathi ngumama wakho ocingweni.
Uzwela luyingxenye enkulu yokusekelwa kwamakhasimende. Cabanga ukuthi ngumama wakho noma ilungu lomndeni osondele ocingweni; ungafuna ukuthi isikhungo sokweseka siphendule ngokushesha (noma umnikeze ithuba lokuphinda ushayelwe ucingo). Ungafuna nokuthi i-ejenti imhambise esinyathelweni ngasinye sesixazululo ngokubekezela nozwela, noma ngabe lokho bekusho ukumkhulumisa ngesixhumanisi sokuzenzela. Ekugcineni, ungafuna ukuthi umenzeli amnike sonke isikhathi asidingayo, noma ngabe lokho kuthatha ikholi kudlule isikhathi sokuqondiswa esingafanele.
Buza umphathi wezinsizakalo zamakhasimende kunoma iyiphi inkampani ye-SaaS futhi bazovuma ukuthi ukuqeqeshwa ngamakhono we-software yabasebenzi bokuxhaswa kwamakhasimende akuyona nje into enhle yokuba nayo; kunalokho, kubalulekile. Noma ukuqeqeshwa komenzeli kwenkampani kukuhle futhi izikolo ze-ASA zingaphezulu kwesilinganiso, ukuphatha wonke amakhasimende njengelungu lomndeni kuzokwenza abasebenzisi bahlabe ngomkhiqizo wakho ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto.
4. Khuphula amanxusa akho aye kweminye iminyango
Ukuheha kwangaphakathi kufanele kube yimethrikhi eveza kakhulu impumelelo yokusekelwa kwamakhasimende. Uma inkampani ithuthukisa abenzeli bayo abasebenza kahle kakhulu kwezinye izingxenye zenhlangano, kusho ukuthi akugcini ngokuqeqeshwa kahle kepha futhi kunikeza labo basebenzi indlela yokusebenza.
Iminyango yesevisi yamakhasimende ehlakaniphile ayesabi ukuvumela abenzeli bayo badlulele ekuthengiseni, ekuqinisekiseni ikhwalithi, ekuthuthukiseni umkhiqizo, noma kwezinye iziyalo. Kusho ukuthi lawo ma-ejenti afunde lo mkhiqizo kanye namandla awo namathuba okukhula kusuka ekuvezweni kwabo ngaphambili. Njengabathweswe iziqu enkampanini "yepulazi system", banokuqonda okuhle nemikhuba ezobaluleka kulo lonke ibhizinisi.
Ukucabanga kabusha okubalulekile ukushayela impumelelo (yekhasimende)
Osomabhizinisi bathanda ukusho ukuthi, "Lokho okulinganiswayo kuyalawulwa." Ekusebenzeni kwamakhasimende, noma kunjalo, lokho okulinganiswa kuvame ukutholwa kusetshenziswe. Abahlinzeki be-SaaS bahle ekugwemeni izingibe zokulinganisa ngoba bayabona ukuthi umkhuba ususa insizakalo kude namakhasimende esikhundleni sokuya kubo.
Izwe eliqhubeka ngokukhishwa laphaya, futhi amakhasimende ayakwazisa okuhlangenwe nakho ngaphezu kwazo zonke ezinye izinto. Indlela inkampani ephatha kahle ngayo amakhasimende ayo okungenani ibaluleke kakhulu njengomkhiqizo ewuthengisayo. Abahlinzeki be-Software kungenzeka ukuthi bathengisa okokuqala S in SaaS, kodwa ukuze baphumelele kufanele babe ngamakhosi okwesibili S. Lowo ngumbono wokuthi noma iyiphi inkampani — nanoma iliphi ikhasimende — lizowuthokozela impela.
Tags: njengeisivinini esimaphakathi sokuphendulaisivinini esimaphakathi sokuphendulab2bigama lomkhiqizoukwethembeka kwamakhasimendeukugcinwa kwamakhasimendeInsizakalo yekhasimendeimisebenzi yamakhasimendeimpumelelo yamakhasimendeukulungiswa kokuthinta kokuqalaikhasimende lesikhathi esideikhwalithi yesevisisaasIzikhungoisofthiweisoftware njengensizakalo